एक अयोग्यता युरोप मेड सजिलो संग यात्रा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > एक अयोग्यता युरोप मेड सजिलो संग यात्रा
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 05/06/2020)
हामी किन रेल यात्रा गर्छन्? रेल यात्रा आराम छ, व्यावहारिक र अन्य परिवहन विधिहरू बस मेल खाँदैन सक्ने एउटा सामाजिक पक्ष प्रदान गर्दछ. तथापि, यात्रा एक अशक्तता केही गर्न मुश्किल हुन सक्छ. यो रमाइलो मा आनन्द सक्दैन होइन, हुनत. यो लेख तपाईं को आवश्यकता केही आधारभूत क्षेत्रमा प्रदान गर्दछ योजना गर्दा विचार आफ्नो रेल यात्रा त्यसैले यात्रा युरोप मा एक अशक्तता संग कम तनावपूर्ण छ.
जबकि त्यहाँ केही पहुँच चुनौतीहरू पक्कै हो, आधारभूत तथ्य अधिक अनुसन्धान तपाईं छ, अधिक सुलभ र मजा आफ्नो यात्रा हुनेछ! उदाहरणका लागि; तपाईं Herculaneum गरेको भग्नावशेष गर्न लगभग समान छन् भन्ने थाहा छ Pompeii, तर व्हीलचेयर-मैत्री छन्? र विकलांग क्रूज यात्रुहरूले लिन छैन “गधा बाटो” को ठाडो भीर अप Santorini को ग्रीक द्वीप भ्रमण गर्दा? आफ्नो छुट्टी सङ्घर्ष हुनु आवश्यक छैन - आफ्नो गृहकार्य गर्न र आफ्नो यात्रा पूर्णतया सुलभ होटल आवास भरिएको गर्न सकिन्छ, सुलभ बीच पहुँच मार्गहरू पर्यटक आकर्षण, र अद्भुत पहुँच यात्रा अनुभव.
यदि तपाईं एक अशक्तता संग यात्रा जुन ट्रेन बचत-एक-ट्रेन मा लिन?
के तपाईं उपलब्ध धेरै विकल्प छ भने (केही देशहरूमा मात्र एक रेल प्रणाली छ), एक अशक्तता आवश्यकता भन्दा सेवाहरू आफ्नो यात्रा गर्न अनुकूल प्रदान गर्दछ वाहक रोज्ने प्रयास. अर्थात्; बोर्डिङ सहायता र पहुँचयोग्य ताजा स्थिति कार. Washrooms पनि एक साथी वा परिचर सहित तपाईं र तपाईंको व्हीलचेयर समायोजित गर्न पर्याप्त ठूलो हुनुपर्छ. सधैजसो, अग्रिम तपाईं अनावश्यक आश्चर्य जोगिन सक्नुहुन्छ सकेसम्म धेरै प्रश्न!
एक अशक्तता सेवा संग विशेष यात्रा एक क्षेत्रबाट अर्को फरक हुन सक्छ, मापदण्ड को एक नम्बर आधारमा; आफ्नो विशेष रेल मा कार, विभिन्न मा सुविधाहरु स्टेशन तपाईंको मार्ग र पहुँचलाई पनि आफ्नो वाहक नीति साथ.
ब्रसेल्स गाडिहरु गर्न कोलोन
एक पटक तपाईं यसलाई प्राप्त ध्यान आफ्नो टिकट र यात्रा जाँच्न. तपाईं आफ्नो विभिन्न stopovers मा हैरानी छैन भनेर तपाईं आफ्नो नीति र प्रावधान संग आराम गर्दै छन् सुनिश्चित (विशेष गरी जब विदेशी यात्रा).
Ramps र वजन सीमाहरू
मा र रेल बन्द रही स्पष्ट भएको यात्रा को एक महत्वपूर्ण भाग हो. निश्चित आफ्नो प्रस्थान र आगमन स्टेशन उच्च स्तरको मञ्चहरूमा वा व्हीलचेयर लिफ्टहरु साथ सुसज्जित. एक अशक्तता संग यात्रा गर्दा यसले धेरै सजिलो र आफ्नो रेल बन्द प्राप्त गर्न गर्नेछ.
मिलान पम्पी गाडिहरु गर्न
फ्लोरेन्स पम्पी गाडिहरु गर्न
Salerno Pompeii गाडिहरु गर्न
वाहक को बहुमत एक अशक्तता र सम्भावित संग यात्रा मान्छे समायोजित गर्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो के हुनेछ अतिरिक्त सामान तिनीहरूले आवश्यक हुन सक्छ (जस्तै. व्हीलचेयर, अक्सिजन ट्यांक, आदि). तपाईंलाई थाहा छ भने तपाईं अतिरिक्त सामान आवश्यकताहरु आवश्यक जाँदैछन्, तपाईंको वाहक अग्रिम थाहा.
शहर को सबै भन्दा सुलभ भागहरु मा रहन. यो तपाईंको रेल यात्रा योजना को मुश्किल भागहरु को एक अशक्तता संग यात्रा गर्दा हो. तपाईं एक ठूलो पहुँच होटल फेला हुन सक्छ, तर तपाईं हिंड्न गर्दा के पाउनुहुनेछ / अगाडि ढोका बाहिर रोल? त्यहाँ सबै दिशामा पहाड र सिढी हो? तपाईं cobblestones भन्दा रोल हुनेछ? त्यहाँ पहुँच रेस्टुरेन्ट नजिकै? यो होटल छिमेकी अनुसन्धान गर्न महत्वपूर्ण छ. तिमी प्रयोग गर्नसक्छौ Google नक्सा सडक दृश्य देशमा को Lay प्राप्त गर्न, त्यसपछि आफ्नो प्रश्न संग होटल इमेल.
सबै बाहिर व्यवस्थापक बाटो संग, आराम र साहसिक रमाइलो गर्न समय लिन सम्झना. आफ्नो सँगी यात्रु पूरा गर्न केही समय लाग्न, विन्डो बाहिर हेर्न, या बस एक सानो लागि मार्ग यात्रा रूपमा धेरै अघि गएका छन्, जबकि नष्ट प्राप्त.
तपाईं बीच तपाईंको रेल टिकट बुक गर्न सक्छन् युरोप मा सबै भन्दा छिटो रेल मा सुरक्षित-एक-ट्रेन लगभग हरेक गन्तव्य मा माथि enlisted3मिनेट, मा सस्ता रेल टिकट दर र obnoxious बुकिंग शुल्क को राहत!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ?, त्यसपछि यहाँ क्लिक: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-disability-europe/- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#अशक्तता #व्हीलचेयर रेल यात्रा रेल यात्रा traveltips